घोस्टराइटि - - कसरी कागजीपत्रहरूको लागि लेखन साझेदार खोजी गर्ने
तपाईलाई के थाहा हुनुपर्दछ!
आफूलाई अब विश्वस्त गर्नुहोस्!
हामी तपाईंलाई शब्दहरू र कार्यहरूमा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी छौं!
को अवधारणा घोस्टराइटिंग विशेष गरी हालैका वर्षहरूमा सबैलाई ज्ञात शब्दको रूपमा विकसित भएको छ।
तर भूत लेखनको अर्थ के हो?
सामान्यतया, त्यो हो एक ग्राहक द्वारा एक सेवा को उपयोग को लागी उसको विशिष्टताहरु र इच्छा अनुसार लेखिएको काम को उद्देश्य को साथ। यसले पाठ्यक्रममा त्यस्ता शैक्षिक कार्यहरू सामिल छन् अविवाहित पुरुष-, वा मास्टर थिसिस, तर यसलाई धेरै नै व्यापक रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ: पुस्तकहरू, लेखहरू, पाठहरू र अन्य लिखित फारमले भूत लेखकको कार्य क्षेत्रलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
एप्लिकेसनहरू, प्रस्तुतीकरणहरू र रिपोर्टहरू पनि विषय क्षेत्रका भागहरू हुनसक्छन् जुनसँग भूत लेखकहरूले आफैंलाई घेरेका छन्।
यो अकस्मात्‌ किन हुन्छ हामी प्रायः भूत लेखन गतिविधिहरु एलियन भेट्छौं। जे होस्, यी व्यक्तिहरूले नि: शुल्क लेखक बाहेक अरू केहि पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन।
तर तपाईलाई भूत लेखनको बारेमा के थाहा छ?
यहाँ आउनुहोस् ...
... एकै नजरमा सबै प्रश्नहरू!
(शैक्षिक) भूत लेखनको वास्तविक अर्थ के हो?
र किन त्यहाँ त्यस्तो कुरा छ?
तेस्रो पार्टीको लागि पाठ लेख्नु तपाईंको आफ्नै सहभागितामा
... यसरी आत्मा गतिविधिलाई सरल बनाउँछ।
साधारणतया तपाईं सक्नुहुन्छ भूत लेखक लगभग सबै क्षेत्रहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अनुप्रयोगका लागि, भाषण, ब्लगहरू, पुस्तकहरू वा प्रस्तुतिकरण, वा शैक्षिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा, जस्तै घर, स्नातक, मास्टर, डॉक्टरेट र dilpom थिसहरूको लागि।
यी "भूतहरु" को अनुसन्धान, लेख्नुहोस् र ग्राहकको तर्फबाट पाठ्य काम सही गर्नुहोस् र त्यसपछि तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउँनुहोस्। विशिष्टताहरू र टेम्पलेटहरू र आवश्यक कागजातहरूको उपलब्धतामा निर्भर गर्दै, पाठ सम्भव भएसम्म सामग्रीमा सत्यको रूपमा लेखिएको छ।
एकेडेमिक भूत लेखन ...
... गुणात्मक पर्याप्त मान्नका लागि धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्नै पर्छ!
शैक्षिक डिग्रीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, आधिकारिक, सामाजिक र वैज्ञानिक पाठहरूको हुनु पर्छ आवश्यक छ प्रमाणित गर्न सक्छ लेन्स लेखिएको र सबै भन्दा माथि विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न सक्छ।
त्यसोभए यस्तो हुन्छ कि पेपरनरडसका लेखकहरू जहिले पनि योग्य शिक्षाविद् हुन्छन् जसले उनीहरूको विषयहरूमा पर्याप्त अनुभव प्रदर्शन गर्न सक्दछन् र शैक्षिक स्रोतहरूको सहि उपयोगको बारेमा जान्न सक्छन्।
विशेषज्ञ कर्मचारीहरूलाई रोजगार दिएर, हामी तपाईंलाई उत्तम गुण र विवेकको प्रतिज्ञा गर्न सक्छौं!
घोस्टराइटिंग अवैध छ, हैन?
होईन, भूत लेखन सधैं नै कानुनी हुनेछ।
किनभने मूलत: भूत लेखकलाई काममा लगाउनु भनेको सेवा प्रयोग गर्नु बराबर हो।
तेस्रो पक्षहरूको अधिकारको हनन नभएको अनुबन्धको स्वतन्त्रता यस क्षेत्रमा लागू हुन्छ जस्तै अरू कुनै ठाउँमा।
कि लेखकको नाम छ वा छैन त्यसकारण केवल करारको सम्झौताको अधीनमा छ।
यो पनि एक मा थियो फ्रैंकफर्ट उच्च क्षेत्रीय अदालतको फैसला (०१.० .01.09.2009 .२०० - - रेफ्री: ११ यू /11१/०51)) पुष्टि भयो।
भूत लेखकहरूको प्रयोग आजकल धेरैजसो क्षेत्रहरूमा खेती गरिन्छ र अब उपेक्षित हुन सक्दैन।
मिडिया, राजनीति, विज्ञान वा स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा होस्: लिखित कागजातहरूको अनुरोधले तपाईंलाई अर्को पटक नचाहिने समय फिर्ता दिन सक्छ।
का लागि टेम्प्लेट लेखन घरको काम, थेसेज, मास्टर थेस, स्नातक थेस र अन्य यी कानुनी दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक छैन।
Achtung! यी लेखन कानूनी दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक छैन, यो अलग टेम्प्लेटको रूपमा टेम्प्लेट प्रस्तुत गर्दा भिन्न हुन्छ!
× चेतावनी रद्द गर्नुहोस्
कानूनी फ्रेमवर्क के हो?
यो तिनीहरूमा धेरै निर्भर गर्दछ पाठको प्रयोग गर्नुहोस् on!
घोस्टराइटरहरूले विद्यार्थीहरूको लागि मात्र सहयोगी तरीकाले काम गर्दैन, तर धेरै कम्पनीहरू र लेखकहरूको लागि पनि, जसले लेख्न मद्दत चाहिन्छ किनभने पर्याप्त समय छैन वा तिनीहरू तपाईंमा निर्भर छन्। हिज्जे त्रुटि मुक्त पाठ छोड्न सक्षम हुन चाहन्छु।
र वास्तवमा भूत लेखकहरू यही हुन्।
ग्राहकहरूले अन्तिम उत्पादनसँग के गर्छन् अब भूत लेखकहरूको हातमा छैन।
उदाहरण को लागी, अरू कसैको काम बुझाउने प्रख्यात भेरिएन्ट तपाईको आफ्नै रूपमा निषेधित हुनेछ, जस्तै यसलाई स्कूलमा प्रतिलिपि गर्ने, ठीक छ?
यद्यपि यो आफैंमा निषेध गरिएको छैन मंथनको साथ मद्दत गर्नुहोस् र सुधार प्राप्त गर्नुहोस् ..
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, भूत लेखनलाई नकरात्मक रूपमा हेरेकै हुँदैन।
भूत लेखनले कहिले अर्थ दिन्छ?
घोस्टराइटिंग कुनै पृथक घटना होइन। धेरैका लागि यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ कामको सहजता यसलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले पुस्तक लेख्नुभएको छ र अब तपाईं यसलाई बजारको लागि तयार हुन चाहनुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, तपाईका कुनै पनि साथीसँग तपाईको १1500०० पृष्ठको पुस्तक, शब्दको लागि शब्द, र मा हिँड्न त्यति समय हुँदैन समस्या निवारण जान। अर्कोतर्फ, तपाईं आफैले यो पुस्तक लेख्नुभयो र तपाईं यसलाई धेरै देख्नुहुन्छ हिज्जे र हिज्जे त्रुटिहरू धेरै होइन। त्यसोभए तपाईं असफलतामा हुनुहुन्छ कि तपाईंले सायद लामो समय र धेरै काम पछि मात्र पत्ता लगाउनुहुनेछ।
र ठीक त्यस्तै हो कागजीहरूको लागि हो!
यस अवस्थामा हाम्रो विशेषज्ञ स्टाफ तपाईंको पुस्तक पढेर खुशी हुनेछन् सुधार र पनि जाँच गरियो चोरीको घटना.
तर पनि क्षेत्रमा शैक्षिक र वैज्ञानिक प्रशिक्षण भूत लेखनले मद्दत गर्न सक्छ।
यहाँ कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको सम्पूर्ण डिग्री एकल काममा निर्भर गर्दछ। दुर्भाग्यवस, तपाईको सम्पूर्ण क्यारियरमा तपाईसँग एउटा पनि छैन शैक्षिक पाठ यस्तो लेखिएको छ, तपाईले विश्वविद्यालयको साथ काम गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईको पढाइको लागि पैसा खर्च गर्नका लागि र त्यसैले दुई महिना छुट लिन सक्नुहुन्न वा तपाईसँग समय छैन।
यहाँ पनि, हामी सल्लाह दिन र टी को साथ मद्दत गर्न उपलब्ध छौंप्रस्ताव आविष्कार, सूत्रहरू, सही उद्धरण र सुधारहरू मसी चोरी चोरी।
यो कुनै पनि हिसाबले आपत्तिजनक होईन किनकि अन्तिम उत्पादन सबै चीजको बाबजूद तपाईंबाट आउँदछ!
हामी केवल त्यहाँ तपाईको लागि छौं मद्दत गर्न!
भूत लेखकहरूका लागि केहि लक्षित समूह छ?
सबै क्षेत्रमा जस्तै तथाकथित छन् फोकस समूहहरूजसले हाम्रा धेरै सेवाहरूको उपयोग गर्छन्। यसका लागि धेरै कारणहरू हुन सक्छन्: धेरै कम समय वा प्राविधिक ज्ञान कसरी सेट गरिएको म्यादलाई हिट गर्न असम्भव बनाउनुहोस्, वा प्रश्नहरू सोध्नुहोस् शैलीगत सूत्रहरू र उद्धरण शैलीहरू काम रोक्नु।
अन्तमा, निर्णय पहिले गर्नुपर्नेछ: अवश्य पनि, दिएकालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ आवश्यकताहरु, गुणवत्ता र अवश्य पनि सार्वभौमिकता.
ग्राहक पोर्टफोलियो त्यसैले एक प्रस्ताव प्रस्ताव कम्पनीहरु को लागी एक इष्टतम ब्रान्ड उपस्थिति लक्ष्य परामर्श एजेन्सीहरूजोसँग सहयोगको समर्थन गरिएको छ व्यावसायिक सूत्रहरु brauchen, अधिकारीहरूजोसँग नयाँ सम्पादन गर्न सहयोग छ फारामहरू अप गर्न आवश्यक छ निजी व्यक्ति, एक विद्यार्थी को जस्तै स्नातक वा मास्टर थिसिस बुझाउनु पर्छ।
सामान्यतया, हाम्रो लक्षित समूह सबैको लागि विस्तार गर्दछ प्रदर्शन उन्मुख क्षेत्रहरू जीवनमा त्यो एउटा विशिष्ट र जानकार सूत्र र प्रभाव आवश्यक छ। र वास्तवमा हामी यहाँ छौं भनेर नै हो!
घोस्टराइटर्सलाई काममा लगाउँदा म कुन लागतको आशा गर्न सक्छु?
छोटकरीमा, यो यहाँ भन्न सकिन्छ: अधिक प्रयास, अधिक खर्चिलो अन्तिम परिणाम हुनेछ।
किनकि यो छ निजीकृत र एक पटक उत्पादन एक उत्पादन को, मूल्य पाठ्यक्रम प्रयास मा आधारित छ।
निम्नलिखित हाम्रो लागि निर्णायक छ:
स्कोप + विषय + आकांक्षा + समय फ्रेम
थप रूपमा, पाठ्यक्रमको मूल्यहरू पनि तपाईं कुन शैक्षिक डिग्री हासिल गर्नु पर्ने हो निर्भर गर्दछ।
त्यसैले यो हुन्छ कि एक वर्णनात्मक स्नातक थीसिस pages० पृष्ठको साथ एक भन्दा धेरै सस्तो हुन्छ अन्वेषण मास्टरको थिस्सिस -०-60 pages पृष्ठहरूको साथ। स्टाफको प्रयोगमा निर्भर रहँदै, त्यहाँ भिन्नताहरू पनि हुन्छन् जुन विषय क्षेत्रहरूसँग मिलेर काम गर्दछन्।
त्यसोभए तपाईले देख्नुहुनेछ कि यी केसहरूमा सपाट दर बनाउनु अव्यावहारिक हुनेछ।
हामी तपाईलाई जान दिन खुशी छौं गैर बाध्यकारी प्रस्ताव किनभने भूत लेखकहरू तपाई जस्तो सँधै सोच्दछन् त्यति महँगो हुँदैनन्।
के मेरो असाइनमेन्ट वास्तवमा गोप्य छ?
विवेक अर्को छेउमा छ गुणवत्ता हाम्रो उच्च प्राथमिकता!
यसैले हरेक काम, कसरी सानो होस्, एक हुन्छ जानकार कर्मचारी उपलब्ध गराईयो।
लेख्नदेखि हस्तान्तरण सम्म, तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो प्रेत लेखकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंसँग सफा अन्तस्करण हुन सक्छ स्थिति जाँच गर्नुहोस् अनुरोध
त्यसैले एक वरिपरि इष्टतम विवेक तपाइँसँग सँधै छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष सम्पर्क व्यक्ति तपाइँको पर्यवेक्षक र लेखक को रूप मा।
के त्यहाँ सन्तुष्टि ग्यारेन्टी छ?
Um उत्कृस्ट गुणस्तर Papernerds.de मा हामी ग्यारेन्टी गर्न तपाईंको विचारहरू सम्भव भएसम्म कार्यान्वयन गर्न केहि उपायहरू लिएका छौं:
१. केवल कागजातपत्रहरूमा काम योग्य कर्मचारीहरू, अर्थात् विस्तारमा शिक्षाविद्हरू, डॉक्टरेट विद्यार्थीहरू, व्याख्याताहरू, वैज्ञानिकहरू र अन्वेषकहरू।
२. हाम्रा कर्मचारीहरूसँग यी सबै अधिकारमा छ लेखन र विश्लेषणात्मक कौशलताकि तपाइँ तपाइँको चाहनाहरु लाई लागू गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईं हामीलाई नमूना पाठको साथ विश्वस्त गर्नुपर्नेछ जब तपाईं हाम्रो कम्पनीमा सम्मिलित हुनुहुन्छ!
We. हामी निर्माण गर्दछौं स्थायी सम्पर्क हाम्रो ग्राहकको साथ! अर्को शब्दहरुमा, काम तपाइँको विनिर्देशहरु को हिसाब ठीक उत्पादन हुनेछ र समीक्षा र बारम्बार छलफल हुनेछ! रूपरेखा बाट वा पर्दाफास, अध्यायहरूको संरचनाको बारेमा, शीर्षकहरू / सिद्धान्तहरू, उल्लेख गर्ने विधि र लेखन शैलीका विधिहरू, सबै कुरा विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको छ!
Something. केहि फिट हुँदैन: तपाईं हामी संग एक छ साथीयदि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ।
हामी केवल सुधार गर्न सक्दछौं यदि तपाईंले हामीलाई के कष्ट दिनुहुन्छ बताउनुहुन्छ। र वास्तवमा हामी चाहान्छौं!
यदि तपाईं अझै पनी अन्तमा तपाईंको पाठसँग पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने हामी यहाँ थप जानकारी पनि प्रदान गर्न सक्दछौं संशोधनहरू बोल्नुहोस्।
केवल तपाइँको सुपरभाइजरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
के एक भूत लेखकको लागि चोरी चोरी अनिवार्य छ?
Papernerds.de मा तपाइँ पक्कै तपाइँको कामको लागी एक पाउनुहुनेछ नि: शुल्क साहित्यिक चोरी त्यसो गर्न।
हामी तपाईंलाई काम र तपाईं स्वतन्त्र गर्न चाहन्छौं उत्कृस्ट गुणस्तर डेलिभर गर्नुहोस्, यही कारणले तपाईंको काम सामान्य रूपमा लागू हुने नियमहरूको पालना गर्दछ कि भनेर तपाईंलाई यो जान्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ!
त्यसैले चोरी चोरीबाट जोगिनका लागि हामीसँग उच्च प्राविधिक स्तर छ सक्षम कर्मचारीहरुकसलाई अनुमति छ के थाहा छ के छैन थाहा छैन।
तपाइँलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्न, हामी तपाइँलाई उत्तम प्रयोग गरेर परीक्षा दिनेछौं चोरी साहित्य त्यसो गर्न।
यदि तपाईंसँग अझै चिन्ताहरू छन् भने, तपाईं हामीलाई कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ!
अवश्य पनि, तपाईसँग प्रयोग गर्ने विकल्प पनि छ नि: शुल्क कार्यक्रम इन्टरनेट मा तपाइँको आफ्नै चेकहरु शुरू गर्नुहोस्।
शैक्षिक भूत लेखनको लागि म कसलाई सम्पर्क गर्न सक्छु?
खोरमा सहि सम्पर्क व्यक्ति यसलाई खोज्नु प्राय त्यति सजिलो हुँदैन।
इन्टरनेटले भूत लेखन सेवाहरूको दायरा बढाएको छ।
तर मैले कसरी निर्णय गर्ने र मेरो लागि सही समाधान के हो?
यहाँ के उपलब्ध छ त्यसको संक्षिप्त सिंहावलोकन यहाँ छ:
तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ एक व्यक्ति ठ्याक्कै एक विशेष शीर्षकको लागि?
त्यसोभए तपाईसँग यस विकल्पको साथ सफलता पनि हुन सक्छ।
स्वतन्त्र भूत कामदारहरू तपाईंको ग्राहकहरू आफैंको लागि हेर्छन् र यसैले केवल एउटा शीर्षक प्रयोग गर्दछ, त्यो एउटा जसमा उनीहरू परिचित छन्। समाप्त भयो!
भूत लेखन सेवाहरूको लागि प्लेटफर्महरू / समुदायहरू
लगभग eBay वर्गीकृत जस्तै: तथाकथित मा घोस्टराइटिंग प्लेटफार्महरू ग्राहकहरूले इच्छित सेवाहरू राख्न र प्रस्तावहरू लिन सक्दछन्। निस्सन्देह, यहाँ मूल्यहरू धेरै फरक हुन्छन्, किनकि तपाईं विभिन्न पार्टीहरूबाट विभिन्न प्रकारका प्रस्तावहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। जे होस्, यसले गुणस्तरको तुलनालाई पनि जटिल बनाउँदछ, किनकि अनुसन्धान तपाई एक्लोमा निर्भर छ। प्रत्येक प्रस्तावले त्यसो भएपछि त्यो प्रतिबद्ध गर्छ।
घोस्टराइटिंग एजेन्सीहरू - लेखन सेवाहरू
मर्न पूर्ण समाधान अन्त ग्राहकका लागि: तपाईसँग लगभग पृष्ठ छ सबै विषय क्षेत्रहरू र व्यावसायिकको पहिले नै चयनित चयन सक्षम घोस्टराइटरहरू वर्षौंको अनुभव संग। तपाईंसँग सबै केसहरूको लागि सिधा सम्पर्क व्यक्ति छ र भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ चोरी साहित्य मुक्त पाठ अगाडि हेर्दै। थप रूपमा, तपाइँ एक दर्ता गरिएको कम्पनी संग एक आधिकारिक सम्झौता निष्कर्ष र यसैले कानुनी सुरक्षा पनि प्राप्त।
यहाँ कालो भेडाहरू पनि छन्, तर तपाईं तिनीहरूलाई केही सुझावहरू र युक्तिहरूको साथ जरा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले कुन मोडललाई अन्ततः छान्नुहुन्छ बिल्कुलै तपाईमा निर्भर हुन्छ।
जे होस्, यदि तपाई चाहानुहुन्छ Papernerds.de जस्तै एक सेवा एजेन्सी द्वारा आफ्नो काम गरिन को लागी, तब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस थप जानकारीको लागि खुशी छ!
म कसरी सही घोस्टराइटर फेला पार्न सक्छु?
दुर्भाग्यवस त्यो छ घोस्टराइटिंग उद्योग कुनै चीजको लागि नकारात्मक विचारहरूले भरिएको छैन।
अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा जस्तै, इन्टरनेटले पनि धोखाधडी गर्नेहरूलाई ग्राहकहरूलाई छिटो र सजिलो हुने अवसर प्रदान गर्दछ।
किन यो महत्त्वपूर्ण छ यसमा नै भूत लेखन एजेन्सीहरूसँग काम गर्ने कुन सन्दर्भहरू उनीहरूले प्रदान गर्न सक्दछन् र जाँच गर्नुहोस् कि उनीहरूको प्रस्ताव कत्तिको गम्भीर रूपमा विज्ञापन गरिएको छ।
तपाइँको लागि, संक्षिप्तमा, सबैभन्दा लोकप्रिय तथ्यहरू:
कम्पनी ईतिहास कस्तो देखिन्छ?
तपाईंले चयन गर्नुभएको एजेन्सी कति समयदेखि बजारमा छ र त्यहाँ कुनै राम्रो-स्थापित प्रमाणहरू छन् (समीक्षा, टाइमस्ट्याम्पहरू सहित लेख, ...)
सामान्यतया, स्क्यामरहरू लामो समयसम्म अनलाइन रहँदैन।
एजेन्सी कहाँ आधारित छ?
के तपाईको एजेन्सी जर्मनी, स्विजरल्याण्ड वा अष्ट्रियामा आधारित छ?
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले वास्तविक ठेगानाहरू र फोन नम्बरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ जब तपाईले रोज्नु भएको छ।
यदि तपाईं एजेन्सीको अनुसन्धानको बखत कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा पुग्नुहुन्न भने, यो धेरै सम्भव छ कि तपाईं एक विदेशी फ्रड कम्पनीमा चलाउनु भयो।
यसको बारेमा के हुन्छ?
मूल्यहरू जुन सामान्य मूल्य औसत भन्दा तल छन् एक संकेत हुनुपर्दछ कि तपाईं इमानदार कार्डको साथ यहाँ खेल्दै हुनुहुन्न।
यस प्रकारको थेसिस या त कम योग्य भूत लेखकहरूले लेखेका हुन् वा तपाईले कुनै सेवा पाउनु नै भएन।
गुणात्मक प्रभावको रूपमा मूल्य निश्चित रूपमा एक मापदण्डको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जे भए पनि धेरै प्रस्तावहरू पाउनुहोस् र त्यसपछि कुन कुरा तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त छ र कुन सुरक्षित लाग्छ लिनुहोस्, किनकि तपाईंले धेरै प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ, तर वास्तवमा डेलिभर गर्नुहुन्न।
सामान्य धारणा के हो?
मूल्य निर्धारण कति पारदर्शी छ?
के तपाईंसँग समय टिकट सहित प्रदान गरिएको सेवाहरूको सिंहावलोकन छ?
के तपाईं सुरुमा यथार्थपरक अनुमानहरू पाउनुभयो?
ह्यान्डओभरले कसरी काम गर्छ र तपाईंसँग सुधार अनुरोध गर्ने वा प्रगति जाँच गर्ने मौका छ?
वा तपाईंले ब्रेकडाउन बिना नै फ्लैट दर प्राप्त गर्नुभयो?
एजेन्सीले के सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछ?
विशेषज्ञ क्षेत्र र कार्य र लेखनको प्रकारहरूको लागि व्यक्तिगत एजेन्सीहरूको सेवा पोर्टफोलियो जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं सम्बन्धित क्षेत्रबाट सक्षम कर्मचारीहरूको कुनै संकेत पाउन सक्नुहुन्न, त्यसोभए तपाईंले यहाँ कुनै अर्डर राख्नु हुँदैन।
सेवाहरू कसरी विज्ञापन गरिन्छ?
एजेन्सी कसरी सामाजिक नेटवर्क, विज्ञापन वा प्रेस विज्ञप्तिमा वा सम्बन्धित पृष्ठहरूमा लागू गर्दछ?
के तपाईं एक टाइमलाइन retrace गर्न सक्नुहुन्छ?
अन्यथा, समान कुरा यहाँ लागू हुन्छ: यदि तपाईं यस एजेन्सीको लागि केवल एउटा प्रविष्टि फेला पार्न सक्नुहुनेछ, भने तपाईंले यहाँ एक शंकास्पद प्रदायक पनि फेला पार्नुभयो।
भूत लेखकबाट लेखहरू तपाईंको आफ्नै भन्दा किन राम्रो छन्?
यो प्रश्नको वास्तवमै द्रुत जवाफ दिइन्छ।
यदि तपाईंलाई मद्दतको आवश्यकता पर्दैन र आफ्नो कारणको बारे निश्चित हुनुहुन्छ भने, पर्याप्त समय पाउनुहोस्, वा शैक्षिक कागजातहरू लेख्न रमाईलो पनि गर्नुभयो भने, तपाईंले घोस्टराइटर खोज्नुहुनेछैन।
यद्यपि, क बग फिक्स र सुधारहरूको लागि दोस्रो सुधार नेतृत्व गर्न।
सिद्धान्तमा, प्रेत लेखकहरूले ठीक त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछन् जो केवल यस प्रकारको कामको लागि जन्मेका थिएनन् वा यसबाट निराश भएका छन्। थप रूपमा त्यहाँ एक छ समय र जीवनको गुणस्तर फेरी, किनकि दैनिक तनाव र असफलताको डरले नकारात्मक पक्षहरूलाई पनि हटाउन सक्छ।
के तपाईंलाई भूत लेखकको रूपमा पेशाको लागि निश्चित प्रशिक्षण चाहिन्छ?
घोस्टराइटिंग अझै सक्रिय छ कुनै प्रशिक्षुता छैनजसको दुर्भाग्यवस यसको मतलब यो पनि हो कि कानुनी रूपमा सबैले आफूलाई भूत लेखक लेख्न सक्छन्।
सम्भाव्यताको लागि नै किन हो धोखाधडीका केसहरू यस क्षेत्रमा ठूलो छ।
तर यदि तपाईं वास्तवमै सहयोग चाहानुहुन्छ र यसको फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?
सूचित गर्न तपाईंको कर्तव्य गर्नुहोस्!
सस्तो सँधै राम्रो हुँदैन, त्यसकारण मुख्य खोजी मापदण्ड मूल्य होइन, तर हो अनुभव तपाईंको लेखक को।
गेहेन Sie प्रमाणहरू र तुरुन्तै मूल्य निर्णय नगर्नुहोस्।
अन्तत: तपाईका कामका आवश्यकताहरू निर्णायक हुन्छन्, जुन प्रदर्शन पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ।
म कसरी मेरो काम सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छु?
साधारणतया, अधिक जानकारी तपाईले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी तपाईको कार्य सिर्जना गर्न सक्ने अधिक व्यक्तिगत।
हाम्रो आफ्नै विचारहरू, सुझावहरू, अनुसन्धान, र सints्केतहरूले हाम्रो काम सजिलो बनाउँदछ र हामी सक्दछौं छिटो रूपान्तरण समय नेतृत्व गर्न।
एक व्यक्ति को रूप मा तपाईं अधिक योगदान, तपाईंको कार्य अधिक स्टाइलिश हुन सक्छ।
पक्कै पनि यो एक फाइदा हो यदि तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् समयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। जे होस् सम्भव भएमा कागज लेख्न को लागी सम्भव छ भने, यसले दुख्छ गुणवत्ता तल लेखन रचनात्मक प्रक्रियाहरू मध्ये एक हो जुन परिपक्व हुन सक्छ र समयको साथ ग्राहकसँग सञ्चारको साथ विकसित हुन सक्छ। यदि यो विकल्प उपलब्ध छैन भने यो पाठ्य प्रवाहमा पनि परिलक्षित हुन्छ।
तसर्थ: अधिक समय र जानकारी तपाइँ हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, राम्रो!
सबैमा: मेरो फाइदाहरू र बेफाइहरू के हुन्?
के कारणले गर्दा तपाइँ एक घोस्टराइटरबाट मद्दत लिनुहुन्छ अन्ततः केही फरक पर्दैन, किनभने हामी प्रत्येक ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्छौं हुन्छ मद्दत गर्न साहस भएकोमा हामी तपाइँलाई वा यस्तै आरोप लगाउँदैनौं। यस बाहेक, तपाई भूत लेखन एजेन्सीहरूबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ, उच्च डिग्रीको रूपमा गुणस्तर र व्यावसायिकता अवश्य पनि तपाईंको कामको प्रतिनिधित्वमा फेला पार्न सकिन्छ।
राम्रो प्रदर्शन गर्नेहरूलाई यसको लागि पुरस्कृत गरिनेछ!
हाम्रो कर्मचारीहरूले तालिकामा ल्याउन सक्ने व्यापक अनुभवले तपाईंलाई तपाईंको सुधार गर्न मद्दत गर्दछ पूर्ण क्षमताको शोषण गर्न.
तपाईसँग शैक्षिक भाषा प्रयोग गर्न सानो घाटा छ भने पनि। हाम्रो भूत लेखकहरूले तपाईंसँग लक्षित र stylistically निर्दोष तरीकाले विचारहरू कार्यान्वयन गर्न र सम्पूर्ण सहयोगलाई तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुकूलन गर्न सक्दछन्।
बेफाइदाहरूसँग काम गर्दा हुनसक्दछ शंकास्पद एजेन्सीहरू वा व्यक्तिहरू उठ्नुहोस् जब अपेक्षाहरू समय वा अपर्याप्त रूपमा पूरा हुँदैनन्। यस अवस्थामा, राम्रो सल्लाह साँच्चै महँगो हुन सक्छ।
हामीलाई यो हुनबाट रोक्न मद्दत गरौं:
हामी तपाईंलाई छनौट गर्न मद्दत गर्दछौं सही लेखन पार्टनर र तपाइँको राख्नुहोस् शुभकामना कार्यमा।
हामी संग तपाईं पाउनुहुन्छ प्रत्यक्ष सम्पर्क तपाइँको सेवा प्रदायकको साथ र यसैले गर्न सक्दछ सक्रिय प्रभाव तपाईंको कामको लेखन प्रक्रियामा लिनुहोस्। उत्कृष्ट द्वारा समय व्यवस्थापन के हामी सक्षम गर्न सक्छौं? अनुरोधहरू परिवर्तन गर्नुहोस् उत्तम रूपमा, तपाई हामीसँग समयमै आउनुहोस्! हामी सँगै हामी तपाईंसँग अनुसन्धान र ड्राफ्टमा काम गर्न सक्दछौं र तपाईंको आवश्यकता अनुसार एक व्यक्तिगत पाठ सिर्जना गर्न सक्दछौं।
अन्तिममा, राम्रो कामको यसको मूल्य छ र हाम्रो भूत लेखकहरूको कामको लागि तपाइँको सराहनाको लागि बोल्दछ!
यदि हामीले तपाईंको रुचिलाई पेश गरेका छौं भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्:
हामी तपाईंको छानबिनको लागि तत्पर छौं!